Iholide yasemaphandleni kwifama entle, ulwandle lwaseBaltic 1 h - I-Airbnb
Iholide yasemaphandleni kwifama entle, ulwandle lwaseBaltic 1 h
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGutshaus-Crew
Ijikelezwe ziinduli, ihlathi kunye namasimi kwiTollensetal yi-Hohenbüssow.
Wamkelekile kubomi belizwe elinemibalabala. Kude nesixeko, unokubona iindawo ezisemaphandleni ezonwabisayo. Indawo ejikeleze ilali inika uxolo olungapheliyo kunye neendawo ezimangalisayo kwindalo. Indawo yethu ihlala iintsapho ezine, kunye nezilwanyana ezininzi. Abantwana bamkelekile apha. Kwigadi enamagumbi aliqela enemithi yeapile endala, akukho ndawo zokuphumla neendawo zokuphumla zeendwendwe zethu.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex encinci ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex enemimandla es Iflethi okanye indlu ekwicomplex (eyi-35 sqm) inegumbi lokuhlala nelokutyela kunye negumbi lokulala. Omabini la magumbi axhotyiswe ngamaplanga aqinileyo kwaye afumana ukukhanya okwaneleyo kwiifestile. Ikhitshi elincinci elisisiseko lineethempleyithi ezimbini ezishushu ibe likumema ukuba upheke kamnandi. Igumbi lokuhlambela elineshawa liyafumaneka. Ngaphezu koko, le flethi inendawo yokungena eyahlukileyo. Kwigumbi elinye kukho i-Wi-Fi entle kakhulu kwelinye, ngamanye amaxesha kunzima.
Le flethi ilungele abantu abadala ababini. Omnye okanye ababini abantwana bangafumana indawo entle. Abantu abadala abathathu banokuncedwa, kodwa iza kuba yinto efuna ukulungiswa:)
Umatshini wokuhlamba impahla wasekuhlaleni ungasetyenziswa ngeendleko ezongezelelweyo ze-5 € ukuhlamba ngakunye. Isixhobo sokomisa sinokusetyenziswa.
Kukho uhambo oluninzi kule ndawo, njengeBroock Castle okanye iKlempenow Castle.
Ummandla weTollensetal unika abakhenkethi bethu izinto ezininzi ezinjengokuhamba ngephenyane, ukuhamba ngebhayisekile, ukuloba, ukukhwela amahashe nokuqubha kunye nokuhambahamba kwendalo ebanzi. Ulwandle lwaseBaltic luqhuba imizuzu eyi-30 ukuya kweyi-1 kuxhomekeka kwindawo ekuyo. Indawo enkulu yokuthenga ekufutshane ingafikelelwa kwimizuzu emalunga ne-15 ngemoto.
Inqaba iKlempenow kunye neCastle Broock kunye nemicimbi yabo ziindawo ezintle ezikufutshane nathi. Sikwacebisa kakhulu iHofbäckerei Klee eHohenbrünzow...ingcali ikwindawo ekufutshane
Umbuki zindwendwe ngu- Gutshaus-Crew
Sikhathazeke kakhulu ngentlalontle yeendwendwe zethu, zama ukukunika ixesha lokuphumla kwaye zihlala zivulekile kwimibuzo kunye neengcebiso.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Alt Tellin